Xildhibaan sheegay inuu og-yahay sababta ka dambeysay dib u dhaca doorashooyinka dalka (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan sheegay inuu og-yahay sababta ka dambeysay dib u dhaca doorashooyinka dalka (AKHRISO)
Xildhibaan C/laahi Goodax Barre oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dib u dhaca markasta ku yimaada doorashada dalka Soomaaliya, wuxuuna arrintaasi ku eedeeyay inay ka dambeeyaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee uu haatan waqtigoodu dhamaaday.
Wuxuu xildhibaanka sheegay in uljeedka ugu weyn ee laga leeyahay dib u dhaca doorashooyinka ay tahay mid dan-gaar ahaaneed ah, isagoona tilmaamay inay taasi cadeyn u tahay in xildhibaanada Hiiraan iyo Sh/dhexe la sheegay in lagu soo xulayo magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale tilmaamay in arrintaasi looga gol-leeyahay sidii labadaasi gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe loogu soo magacaabi lahaa liis xildhibaano ah oo uu liiska ku diyaarsaday madaxweyne Xasan Sheekh, kuwaas oo heshiis ahaan lagula geli doono inay markale dib u doortaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, xildhibaan C/laahi Goodax Barre ayaa sheegay in dib u dhaca doorashooyinka sidoo kale looga dan-leeyahay in musharixiinta qaarkood dhaqaalo bur-bur lagu rido, maadaama ay haatan guryo uga kireysan yihiin magaalada Muqdisho, islamarkaana ay dhaqaale aad u badan ku bixiyaan ciidanka amnigooda sugaya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray xildhibaan C/laahi Goodax Barre ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay guddiga doorashooyinka dadban ee heerka federaal ay ku dhawaaqeen in muddo bil kale dib looga dhiigay doorashadii dalka.